Akhriso:-Sababta Keentay Dib U Dhaca Meydka Eng. Yariisow Oo La Shaaciyay? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Akhriso:-Sababta Keentay Dib U Dhaca Meydka Eng. Yariisow Oo La Shaaciyay?
Akhriso:-Sababta Keentay Dib U Dhaca Meydka Eng. Yariisow Oo La Shaaciyay?
Guddiga qaban-qaabada aaska Qaran ee loo sameynayo Guddoomiyihii Gobolka Banaadir ayaa shaaciyey in dib u dhac uu ku yimid, taas oo loo sababaynayo cillad farsamo oo ku timid Diyaaraddaii soo qaadi lahayd meydka marxuumka.
Guddiga ayaa sheegay in aaska Qaran uu dib u dhacay Berri subax 08:00AM hadii uu Alle idmo.
Guddoomiyaha Guddiga qaban-qaabada oo ah Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Eng; Cabdi Canshuur Xasan, ayaa sidaasi saxaafadda u sheegay.
Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Eng. Yariisow ayaa Khamiistii la soo dhaafay ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla dalka Qatar,kadib dhaawac Culus oo ka soo gaaray Qaraxii dhawaan ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir xili uu socday Shir looga hadlayay amniga Caasimadda.
Previous article‘Afartii qof ee aan jimicsi samayn mid ayaa khatar ku jira’ WHO
Next articleDEG DEG:-Qarax Goor Dhow Ka Dhacay Magaalada Boosaaso
Daawo: Soo Dhaweyntii Sarakiil kasoo Goostey Jabhada Caare